CMC နဲ့ MMC တင်ပြမှု | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
Masteries® မ်ား ၏လိုင္စင္ယူရန္
အလင္းျပသူ (Coach) ကိုရွာရန္
အဆင့် 1: Mastery Practitioner
MPDP အတည်ပြု Get
အဆင့် 2: နည်းပြဆန္ဒပြ
CMC နဲ့ MMC တင်ပြမှု
သငျသညျအလိုအလြောကျအဖွဲ့ဝင် Dashboard ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, တဖန်ကြိုးစားပါသို့မဟုတ်အောက်ကမေ့ Password ကို link ကိုသုံးပါ။
အဆိုပါပိတ်ပင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏2အဆင့်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကြင်နာစွာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ခရီး၌ဤခြေလှမ်းဖြည့်စွက်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။
အဆင့် 2: တင်ပြမှုကိုလမ်းညွှန်ချက်များ:
အဆိုပါလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏2အဆင့်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်သင့်အားတစ်ဦးဖြစ်ရပါမည် Mastery Practitioner.
အဆိုပါအဆင့်2ဖြစ်စဉ်ကိုဖတ်ရှုပါ ညွှန်ကြားချက်များ သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်တင်သွင်းခြင်းမပြုမီ။ နှစ်ခုအသံသွင်းတင်ပြပါလျှင်,3မှညွှန်ကြားချက်6ပြန်လုပ်ပါ။
အဆိုပါဖြည့်စွက် လျှို့ဝှက် Form ကို၏စွန့်လွှတ်.
အဆိုပါအဆင့်2လျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ပါ:
အသင်းဝင် ID ကိုနံပါတ်
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း # (1 သို့မဟုတ် 2)
သငျသညျတခုပိတ်ပင်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရဆရာနည်းပြ (es) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလော
အမည် (s) ကို
သငျသညျတခုပိတ်ပင်မှတဆင့်ထက်အခြားနည်းပြလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ / ဆရာလိုင်စင်ရခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက, ဒီမှာစာရင်းပြုစုကျေးဇူးပြုပြီး:
ငွေပေးချေမှု Make: အဆင့်များအတွက်ငွေပေးချေမှုရမည့် Submit 2
ငွေပေးချေမှုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်မှ Dropbox ကိုမှတဆင့်အောက်ပါ upload ကျေးဇူးပြုပြီး certification@certifiedcoach.org:
လျှို့ဝှက်ပုံစံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စွန့်လွှတ်။ သင်တစ်ဦး dropbox အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလျှင်, သင်ဒီမှာအခမဲ့ဘို့တဘို့ sign up ကိုနိုင်သည် https://www.dropbox.com/register.
ပိတ်ပင်တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းပြ session ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပြရန်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ကကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သောလမ်းညွှန်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
စာရွက်စာတမ်းရဲ့ start မှာနည်းပြရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံ Specify
ဘာသာစကား: အဆိုပါမှတ်တမ်းအတွက်ဖြစ်ရပါမည် အင်္ဂလိပ်။
ဤနေရာတွင်: အဆိုပါမှတ်တမ်းသူတို့နည်းပြများနှင့် client ကိုထံ၌ကြားရကြသည်ကိုအတိအကျအဖြစ်တိုင်းတစ်ခုတည်းသောစကားလုံးသို့မဟုတ်အသံတစ်ခုတိကျမှုစံချိန်ဖြစ်ရပါမည်
နာယကသတ်မှတ်ခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း နာယကတံဆိပ်များ အဆိုပါစကားနည်းပြသို့မဟုတ် client ကိုဖွငျ့မိနျ့တျောခဲ့ကြသည်လျှင်ညွှန်ပြရန်။ "နည်းပြ", "လိုင်း" Specify သို့မဟုတ်သင်နည်းပြများနှင့် client ကို၏ပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီသုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါကနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအစစျဆေးစပီကာခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီပေးပါမည်။ နာယကတံဆိပ်များတစ်ဦးအူမကြီးနှင့်တစ်ဦးအာကာသခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရဲရင့်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရမည်ဖြစ်သည်။
Timestamp: မီလီမီတာ: ss format နဲ့နာရီအတွက်အချိန်ညွှန်ပြရန် Timestamp ကို (နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့်အတွင်းဆိုလိုသည်မှာအချိန်) ပါ။ Timestamp နာယကတံဆိပ်မတိုင်မီချက်ချင်းဖြစ်ရပါမည်။
တစ်ဦးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်း (.doc သို့မဟုတ် .docx) အဖြစ်မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းပါ။
သင့်အနေဖြင့်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းကူးယူ tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ လက်မှတ်ပြုလုပ်ရန်တင်ပြမတိုင်မီတိကျမှန်ကန်မှုများအတွက်မှတ်တမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
, SAMPLE မှတ်တမ်း
00: 04 နည်းပြ: မင်္ဂလာပါ ......... ..
00: 07 လိုင်း: မင်္ဂလာပါ ......... ..
00: 09 နည်းပြ: ဤနေရာတွင်သင်ကရှိသည်ဖို့ဂရိတ်။
00: 13 လိုင်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
00: 14 နည်းပြ: ကျွန်မနည်းပြအဖြစ်ငါ၏အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက်ပိတ်ပင်ဖို့ကပေးပို့ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်လိုသလား?
00: 19 လိုင်း: ဟုတ်ပါတယ်။ လုံးဝ။
00: 21 နည်းပြ: ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Subdepartment ကို Select လုပ်ပါအဖြဲ့ဝင္အဖွဲ့ဝင်အကျိုးကျေးဇူးများအခန်းကြီး & ဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းသက်တမ်းတိုး က်င့္၀တ္မ်ားသည်အခြားအသင်းဝင်န်ဆောင်မှုများမေးခွန်းများ
အဆိုပါ Subdepartment ကို Select လုပ်ပါMastery အစီအစဉ်ရန်လမ်းကြောင်းကိုMastery Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (ယခင် "သင်ယူသဘောတူညီချက်")အထွေထွေအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်မေးခွန်းများဘာသာပြန်ခြင်း / ဘာသာစကားကိုမေးခွန်းများအခြားအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်မေးခွန်းများ
အဆိုပါ Subdepartment ကို Select လုပ်ပါတစ်ဦးလိုင်စင်ဖြစ်လာသက်တမ်းတိုးအထွေထွေလိုင်စင်မေးခွန်းများအခြားအလိုင်စင်မေးခွန်းများ
အဆိုပါ Subdepartment ကို Select လုပ်ပါသုတေသနတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများနည်းပြများနှင့် Professional ကအသင်းဆက်ဆံရေးရုံးများ
အဆိုပါ Subdepartment ကို Select လုပ်ပါအဆိုပါပိတ်ပင်အသံ™မီဒီယာ / ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး
IAC ဘေလာ့ - အသံ™
အဖြဲ့ဝင္အတြက္ အျမန္ လင့္
Masteries E-book (ဘာသာျပန္)
အမွားမ်ား ႏွင့္ အညႊန္းဆိုင္ရာ E-book
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား အမွန္တကယ္လိုလားေသာအရာ
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း	း အၾကီးဆံုး Online ေစ်းကြက္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္
IAC®လိုဂို ကို Download ရယူပါ။
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းးထိပ္တန္း အလင္းျပသူမ်ား၏ အင္တာဗ်ူး စီးရီး မ်ား
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း	း အလင္းျပသူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရွိေသာ အၾကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈမ်ား
Webinar	း သင္တကယ္ပဲအလငး္ျပျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသလား။
စလိုက္႐ိႈးးအမႈေဆာင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အလင္းျပျခင္းပညာ( ကၽြမ္းက်င္မႈ)
အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ Mastery E-book
Mastery Professional ဖြံ႕ ျဖိဳးေစေရးအစီအစဥ္မ်ား
က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံ (ဘာသာျပန္)
Mastery Professional ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ပံုစံအႀကမ္း
ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ | သေဘာတူညီခ်က္မ်ား | ဥပေဒေရးရာ အသိေပးမွုမ်ား | ရွာေဖြလမ္းညႊန္
Site ေရးဆြဲသူ JMG Marketing Group
ဒီ website ကိုအကောင်းဆုံး browsing အတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသငျသညျပေးရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ပိုပြီးထွက်ရှာပါသို့မဟုတ်သင့် adjust setting များကို.
GDPR plugin ကိုတို့က Powered